ကြွေပြားဝယ်သူများနှင့် ရောင်းချသူများအတွက် အွန်လိုင်း အခမဲ့ပလပ်ဖောင်း | ကြွေပြားဝေလ
ကမ္ဘာအနှံ့ရှိသုံးစွဲသူများ Lacs ရှိသည့်စျေးကွက်သို့0င်ရောက်ပါ
သင့်အားကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတည်ပြုပြီး0ယ်ယူသူများနှင့်ရောင်းသူများနှင့်သင့်အားပိုမိုကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်းများ, အရည်အသွေးနှင့်အမျိုးမျိုးကိုပေးနိုင်သည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတည်ပြုထားသော0ယ်ယူသူများ၏ကွန်ယက်သို့ဆက်သွယ်သောနေရာဖြစ်သည်။
ရောင်းသူများသည်ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်များကိုသာတင်နိုင်သည်။0ယ်သူများသည်ကလစ်အနည်းငယ်မျှသာဖြင့်ရှာဖွေခြင်း,0ယ်ရန်, စကားပြော,
သင်၏ကုမ္ပဏီစာရင်းကို0ယ်ယူသူများအကြားမြင်ကွင်းကျယ်အကွာအဝေးကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သင့်အားတိကျသောဖောက်သည်များကိုပစ်မှတ်ထားရန်ခွင့်ပြုပါ။
တောင်းဆိုချက်တစ်ခု, အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် စျေးနူန်းများစွာ
အမျိုးအစားများအတွက် လေဖြတ် မီးဖိုချောင်ရေဆေးဇလုံ ကော် & ဓာတုပစ္စည်းများ ကြောင်များပုံဖော်ပါ ခေါင်မိုးကြွေပြားများ, စက်ကိရိယာများနှင့်အလင်းရောင် ကြွေပြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ WPC (Wood Polymer Composite) သန့်ရှင်းသောပစ္စည်းများ အစိုးရအဖွဲ့၏အနတ္တ ရေချိုး Faucets á€™á€»á€¬á€¸ ရေပန်း ရေချိုးကန်လျံနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မဟာမိတ်ထုတ်ကုန် ကြည့်မှန် Cistern & ဖိဖိဆေးသိုလှောင်စင်ရ ပြည်တွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး နိုင်ငံတကာကွန်တိန်နာ ဟိုတယ်များ ကုလားထုထု
Size ကို ရွေးပါ။
ကြွေပြားများ လိုချင်ပါသလား။ / သင့်ပရောဂျက်အတွက် သန့်ရှင်းရေး ?
Tileswale app ကို download လုပ်ပြီးကြွေပြားများဝါသနာရှင်များကိုဆက်သွယ်ပါ။ သင်၏ကွန်ပျူတာကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Android နှင့် iOS app ဖြင့်ထားခဲ့ပါ!
နိုင်ငံများ: australia Canada India Myanmar Nepal New Zealand Philippines Saudi Arabia Singapore Thailand UAE UK USA
Tileswale သည် B2B2C Platform0ယ်ယူခြင်း, သန့်ရှင်းသောဝတ်ရုံများ, သန့်ရှင်းသောပစ္စည်းများ, ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, ဖြန့်ဖြူးသူများ, လက်ကားရောင်းသူများ, လက်လီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အဆုံးတွင်အသုံးပြုသူများအတွက်ပလက်ဖောင်းများကို0ယ်ယူရန်နှင့်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို0ယ်ယူနိုင်သည်။
သင်မည်သည့်ကမ္ဘာ၏မည်သည့်နေရာ၌ရှိနေပါစေ, Tileswale သည်သင့်အားအခက်အခဲမရှိဘဲ0ယ်ယူပြီးရောင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ ပလက်ဖောင်းတွင်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိနိုင်ငံပေါင်း 180 ကျော်မှ 200k မှတ်ပုံတင်ထားသောသုံးစွဲသူများတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောသုံးစွဲသူများရှိသည်။ Tileswale သည်အက်ပလီကေးရှင်းတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောစက်မှုလုပ်ငန်းမှထုတ်လုပ်သောထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် Tileswale တွင်0ယ်ယူသူ 65000 ကျော်ရှိပြီးအတည်ပြုပေးသွင်းသူ 35000 ကျော်ရှိသည်။
ဤပလက်ဖောင်းတွင်ပါ0င်သော ဦး ဆောင်ကစားသမားအားလုံးနီးပါးနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတိုးချဲ့ရန်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုချဲ့ထွင်ရန်လွယ်ကူလာသည်။